Subic Bay နှင့်ကိုကိုးကျွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Subic Bay နှင့်ကိုကိုးကျွန်း
Subic Bay နှင့်ကိုကိုးကျွန်း
- Don Juan Ronald
Posted by Don Juan Ronald on Nov 19, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Think Different | 11 comments
Subic Bay မှ ကိုကိုးကျွန်းသို့ဘာကြေင့်ပြောင်းမလာခဲ့တာလဲ ?
လေးစားအပ်သော၊ရုပ်ရည်ခန့်ချော၍ဥာဏ်ပညာဖြင့်ပြည်စုံနေသော သဂျီးမင်းခင်ဗျား(ဒီအတွက် point သတ်သတ်ပေးရန်မလို)
အများသိတဲ့အတိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ Subic Bay ဟာ ၁၉၉၁ခုနှစ်အထိ U.S.Naval Base ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။
၈ လေးလုံးမတိုင်ခင်၁ နှစ်လား၂ နှစ်လားသိပ်မသေချာ၊ ကျနော်တို့အရပ်မှာပြန့်နေသည့်သတင်းလေးတခုကား၊ဖိလစ်ပိုင်သည်၁၉၉၁ ပြီးရင် U.S.ကိုဆက်လက်ပြီးမငှားရန်းပေးတော့ပါ၊သည့်အတွက် U.S.တွေကနေရာအသစ်လိုက်ရှာတဲ့အခါ၊ဗမာပြည်ကြီး၏ကိုကိုးကျွန်းကိုမျက်စိကျနေသည် (တချို့လည်းဗမာပြည်ကသွားရောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟုဆို၏)၊ များမကြာမည်ထိုအချိန်တုံးကနိုင်ငံတော်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး(ဗမာ့သမိုင်းတွင်တဦးတည်းသော ၇ ရက်သမတ )သည် U.S သို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်၊အဲဒီ Deal ကြီးဟာ၊အပေးအယူမတည့်လို့လား?
ကွန်မြူနစ်များ၏လေသံဖြစ်တဲ့ Yankee go home ! ဆိုသလိုပေါ့ ၊နောက်ဆုံးတော့၊ကုလားဖြူသည် Guam ကိုပြန်သွားရလေတော့သည်။
အဲဒီ Deal ကြီးသာတည့်သွားခဲ့ရင်၊ယခုကမ္ဘာ့အခြေအနေသည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်နည်း?
အဲဒီ Deal ကြီးသာတည့်သွားခဲ့ရင်၊တရုတ်ပြည်ကြီးယခုကဲ့သို့ထောင်နိုင်ဦးမည်လော?
အဲဒီ Deal ကြီးသာတည့်သွားခဲ့ရင်၊တရုတ်ပြည်ကြီးသည်ဗမာပြည်ကိုချမ်းသာပေးပါ့မလား?
အထက်ပါအကြောင်းကို သဂျီးက ကျနော့်အားဥာဏ်ပွင့်သွားအောင်၊နဲနဲမိန့်ပေးပါလား။
P.S. အဲဒီ ၇ ရက်သမတ ကြီးသည်တချိန်က၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၌ ကိုးကန့် များကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းစေခဲ့ပြီး ဗကပ များကိုသံလွင်မြစ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင်သာတန့်နေစေခဲ့သည်၊ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒီလူကြီးဟာအရည်အချင်းတော့ရှိပါသည်၊ ဆရာမကောင်းလို့လား?အချိန်အခါမကောင်းလို့လား?ကံမကောင်းလို့လား?ပြောရခက်သည်၊ တခါတလေစဉ်းစားမိရင်လည်သနားသည်။
ဘာဘဲပြောပြော ၈ လေးလုံးမှာသူတော့လွန်နေသည်။
နောက်ဆုံး အဆစ်အဖြစ်နဲ့လူကြီးများအတွက်ဟာသလေးတခုတင်ဆက်ပေးပါရစေ ။
(လူကြီးများဆိုသည်မှာဗိုလ်များ၊အများပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အရာရှိကြီးများမဟုတ်ဘဲ၊ Adult ကိုဆိုလိုပါသည်)
ကျနော်တို့ထိုင်ဝမ်းနိုင်ငံမှာ OG (သားဖွားနှင့်မီးယပ်)ဆရာဝန်များသည်၊ များသောအားဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်။
ဆရာဝန်သည် Speculum နဲ့သားအိမ်ကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၊ဘေး၌ရှိသော assistant nurse မလေးက၊ထိုမိန်းမကြီးအားဘောင်းဘီချွတ်လိုက်ဖို့ပြောသည့်အခါ၊ ထိုမိန်းမကြီးသည်အတင်းငြင်းဆန်နေသည်။
assistant nurse လေးက “ အန်တီ~မကြောက်နဲ့ရှက်လည်းမရှက်နဲ့ကျမဘေးမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာ၊နော်~~ ” ဟုပြောဆိုသော်လည်းမရပါ၊
“ ဆရာလည်းဘောင်းဘီမချွတ်ဘဲနဲ့” တဲ့ဟေ့~~
About Don Juan Ronald
တတိယလူတန်းစား ( နိုင်ငံခြားသား )အဖြစ်ဖြင့်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော democratic ဗမာပြည် ကြီးမှာ၁၃နှစ်နှင့် မှောင်မှိုက်ညစ်ပတ်သောတပါတီအာဏာရှင်ဗမာပြည်ကြီးတွင်၂၉နှစ်၊နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည် ။ ဗမာစာကိုခုနှစ်တန်းမှစတင်၍သင်ကြားခဲ့ပြီးသိပံ္ပဖြင့်အောင်ထားသည့်အတွက် ၊ ဗမာစာအရေးအသားမကောင်းပါ ၊ ပျော်ပျော်နေတတ်၍ “ Chinese ပေါ်ဦး ” ဟုဆရာမကတွင်စေခဲ့ဘူးသည် ၊ Date လွန်ဘိုးတော်တယေါက်ဖြစ်နေ၍ ၊၂၀ရာစုနှစ်အကြောင်းရေးလေ့ရှိပါသည်။
View all posts by Don Juan Ronald →
မိန်းမကြီး ပုံ ခန့် မှန်းကြည့်တာ ၊ အားမလိုအားမရ ဖြစ်သွားဟန် ဖြင့်
ပြောလိုက်ပုံ ရပါသည် ။
ခုတလောကျနော်တို့ထိုင်ဝမ်မှာ တရုတ်ကိုအမေရိကန်ကလိုက်ပိတ်ဆို့တဲ့အကြောင်ဆွေးနွေးမှု Hot နေသည့်အတွက်၊ဒီအကြောင်းလေးသတိရလို့ရေးလိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုံးက အမေရိကန်သမတ Richard Nixon ရဲ့၂၄နာရီမပြည့်တဲ့ရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကနေလွှဲရင်၊
ယခုအခါ Hillary လာတော့မယ်ဆိုတော့၊တမျိုးတဖုံတော့၊အပြောင်းအလှဲဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။
စီအိုင်အေ မေးပြီးမှ ပြန်ပြောတော့မယ်..။
တကယ်က.. ယူအက်စ်က.. ကိုကိုးကျွန်းစစ်အခြေစိုက်စခန်းအတွက်.. မလုပ်နိုင်လောက်ဖူးလို့ထင်ပါတယ်.။ သူဝင်ရင်.. မြန်မာပြည်မှာ.. အဲဒီကတည်းက ဗကပက.. နိုင်သွားပြီး မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း တရုတ်အောက်.. ကျသွားလောက်ပြီ.။
သူ့မှာ.. သီရိလင်္ကာအောက်နားက အင်္ဂလိပ်ပိုင်ကျွန်း(BIOT)ကို ကြိုက်သလိုသုံးနိုင်သလို.. ထိုင်းကိုလည်း သုံးနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
အခုဆို.. မြောက်ပိုင်းသြစတေးလျှကိုပါ.. သုံးနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ပြီ..။ တရုတ်ကိုတော့.. သိသိသာသာ.. ၀ိုင်းနေလိုက်ပါပြီ..။
နောက်တခုက.. တရုတ်က.. သူ့ရဲ့.. ပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ဘယ်တော့မှ အကျခံမှာမဟုတ်ပါဘူး..။
ယူအက်စ်က.. ကိုရီးယားဝင်ရင်.. သူတို့က.. ပရော့စီဝါး လုပ်ပြီး.. ကိုရီးယား ၂ခြမ်းဖြတ်ပစ်တယ်.။
ဗီယက်နမ်ကိုယူအက်စ်ဝင်ရင်.. မြောက်ဗီယက်နမ်လုပ်ပြီး ..နောက်ဆုံး တောင်ဗီယက်နမ်ပါပြန်သိမ်းတာပဲ..
ယူအက်စ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရင်.. တရုတ်က.. မြန်မာပြည်ကို ၂ခြမ်းဖြတ်လိုက်ဖို့.. ၀န်လေးမယ် မထင်မိဘူး.။
ကိုးကန့်တွေ..၀တွေ..ရဲ့စစ်တပ်တွေ.. အလကားရှိနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး..။
စူပါပါဝါတွေနဲ့ ကစားတာ.. အင်မတန် အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်..။
ကျေးဇူးအများကြီးသင်ပါတယ် ခန့်ပြီးချောတဲ့ သဂျီး~~~
စစ်ရေးသဘောမှာ ထိုးစစ်ကို ခံစစ်၊ ခံစစ်ကို ထိုးစစ်နဲ့ ကစားရတယ်။ အခုအချိန်မှာ တရုတ်ကြီး ခံစစ်အနေအထား ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်ပြည်ကို ဝင်တိုက်သင့်တယ်။ ယူနန်ဖက်ကနေ ရှန်ဟဲဆိပ်ကမ်းမြို့အထိ သိမ်းပိုက်လိုက်ရင် တရုတ်ကြီး ဘတ်လဘိုင် ကျသွားမယ်။ ရလာတဲ့ နယ်မြေတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၅ပြည်နယ်မြောက် စိန့်တိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်။ မြန်မာလူမျိုးဆယ်သန်းလောက်ကို အဲဒီနယ်သစ်တွေကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး ရဝတ၊ မဝတ၊ တဝတ ဥက္ကဌ အတွင်းရေးမှူးများ လုပ်ခိုင်းမယ်။ ရွာထဲက ကြေးမုံတို့လို့ တရုတ်၊ ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘက်စုံတတ်သူတွေကို စကားပြန်ခန့်ထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တရားစီရင်ရေး တာဝန်ယူပေးမယ်။ ကြောင်ကြီးကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ရာသက်ပန် ဥက္ကဌလုပ်ပေးမယ်။။။။။
မာမာနဲ့မွှေးပြီး၊ဥာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသော၊ယာဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ဆရာကြောင်ဂျီး(sorry မှားသွားလို့ ခ ဖြစ်ရမယ်)။
ဆရာ့ပုံမတွေ့ဘူးတော့၊ရုတ်ရည်ခန့်ချောဆိုသည့် adjective ကိုတော့မမြောက်စားတော့ပါ။
ဆရာကြောင်၏အာဘော်အရ၊ဆရာသည် တရုတ်ထီးတွေဖယ်၍တရုတ်မကြီး(အသက်+body structure)
Any ကြောင်ဖြူကြောင်နက်၊ကြွက်ဖမ်းနိုင်ရင် The best !
တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ one baby policy ကြောင့်၊တရုတ်မတွေရှားပါးလာ၍၊စားသုံးသူများအတွက်နိုင်ငံခြား(ဗမာပြည်အပါအဝင်)
မှမှာယူတင်သွင်းနေရသည့်အတွက်၊ဆရာကြောင်အတွက် hope မရှိတော့ပါ။
ဒါဆို ပြည်မကြီးက တရုတ်မ မရှာဘူးဗျို့။ ကိုယ့်ဒေသက တရုတ်မပဲ ရှာမယ်။ ကြောင်အတွက် ဖြူဖြူမဲမဲ အရေးမကြီးဘူး၊ ကြွက်ဖြစ်ဖို့သာလိုတယ် မဟုတ်လား။
ပြည်မကြီးက တရုတ်မတွေက မလှဘူးကြောင်ကြီးရဲ့
အနီးအနား တရုတ်မစစ်တစစ်တွေကမှ good
သင့်လျော်ကြောင်းပါ အုကြောင်ရီးခင်ညား ..
စစ်တိုက်တဲ့ဘကမှာ တော့ ဟုတ်ဝူး …
အူးကြောင်ရဲ့ ဒီပါ့မန့်မှာ ရာသက်ပန် CMO လုပ်ပေးးမယ်….